Nagu saabsan - Nanchang Eco Products Products Co., Ltd.
Tan iyo aasaaskii, shirkaddayadu waxay inta badan diiradda saartay soo saarista iyo iibinta qalabka loo isticmaalo dharka, kabaha, koofiyadaha, sanduuqyada, boorsooyinka iyo kuwa kale. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarno waxaa ka mid ah sumadaha oo dhan, sumadaha birta, badhannada birta, birta suun, indhashareerta, calaamadaha dharka, balastarrada maqaarka, qufulka bacaha, xirmooyinka guga, dharka hoosta, xirmooyinka iyo waxyaabo kale oo badan.
Shirkadeena waxay leedahay xuquqda soo dejinta iyo dhoofinta iyo sidoo kale khibrad baahsan oo caalami ah iyo wax dhoofinta. Waxaan bixin karnaa adeeg dhanjistikad ah, keydinta iyo adeegga dhoofinta. Nidaamyada ballansashada internetka ee horumarsan waxay hubinayaan waxtarka sare iyo ka shaqeynta xogta saxda ah kana fogow walwal kasta oo macaamiisha ah.
Warshaddeenu waxay ku taal Shanghai. Bedka oo dhan waa qiyaastii 3500 mitir murabac. Waxaan sidoo kale leenahay xafiis laan ku yaal Nanchang, Jiangxi. Waxaan haynaa ku dhowaad 180 xubnood oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan 25 laf-dhabarka oo ah farsamo-yaqaanno ama dad ku hawlan cilmi-baarista iyo horumarinta. Shirkadeena waxay ku siin kartaa naqshadeyn habeysan iyo talooyin qaasa macaamiisha.
Shirkadeena waxay leedahay nidaam xakameyn tayo leh oo aad u adag. Waxaan marwalba ku adkeynaa 100% kormeerka tayada iyada oo aan loo eegin alaabta ceeriin ama alaabooyinka la dhammeeyay. Tayadayada aadka u saraysa iyo adeegeena wanaagsan ayaa ku kasbaday kalsoonida iyo qadarinta macaamiil badan. Hadda, waxaan noqonay iibiye qalab loogu talagalay noocyo badan oo caalami ah oo dharka sare leh.
Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa baaritaanka ka imanaya macaamiisha dibada iyo kuwa gudaha. Waxaan had iyo jeer ula dhaqmi doonnaa macmiil kasta si dhab ah oo xamaasad leh xitaa amarka weelasha ayaa heli doona dareenkeena sare.